AMAKAAG: Ronald Koeman Wali Maaha Tababaraha Rasmiga Ah Ee Barcelona, Setien Oo Kooxda Jooga & Xogo Layaab Leh Oo Soo Baxay – Laacibnet.net
AMAKAAG: Ronald Koeman Wali Maaha Tababaraha Rasmiga Ah Ee Barcelona, Setien Oo Kooxda Jooga & Xogo Layaab Leh Oo Soo Baxay
Macalinkii dhawaan loo magacaabay tababaraha cusub ee kooxda Barcelona ee Ronald Koeman ayaa la sheegayaa inuusan wali ahayn tababaraha rasmiga ah ee kooxdaas xilli uu soo baxay war cusub oo xasaasi ahi.
Barca ayaa xilli ciyaareedkii hore u ahaa mid madaw iyaga oo kusoo dhammaystay koob la’aan markii ugu horreysay mudo 13 sano ah, 2019-20 ayaa ahaa mid ay laba tababare oo kala duwan oo kala ahaa Ernesto Valverde iyo Quique Setien ku wada fashilmeen.
Setien ayay gaadhay guuldarradii ugu cuslayd kaddib markii ay kooxda ree Germany ee Bayern Munich si arxan darro ah 8-2 ugaga reebtay UEFA Champions League.
Maalmo kaddib fadeexadaas weyn, Setien ayaa shaqadiisa waayay iyadoo bedelkiisa loo magacaabay Koeman balse macalinka ree Holland ayaan wali rasmi u ahayn midka jagadaas leh sida uu sheegayo il-wareedka cadena COPE.
Cope ayaa sheegaya in Koeman uusan wali Barcelona hoggaamin karin kulan tartan rasmiya ah xilli uu hadda laba kulan saaxiibtinimo laba guulood u keenay balse uusan wali ciyaar tartan ah laylin.
Wargeyska ayaa intaas ku daraya in wali aan si rasmi ah loo kala saxeexin waraaqaha macalinimada Barcelona u damaanad qaadaya Ronald taas oo ka dhigan in Quique Setien qudhiisu uusan wali meesha ka baxin.
Sida ay warbixintu sheegayso, Setien ayaan wali si rasmi ah looga wada caydhin Barcelona iyadoo aan wali heshiis buuxa laga gaadhin waraaqda shaqada rasmiga loogaga dirayo.
Warkan ayaa ah mid halis gelinaya tababare Koeman iyo qorshaha ay Barcelona xilli ciyaareedka ku bilaabanayso xilli ay kooxda Vilarreal wajahayaan qaybaha dambe ee bishan September.